Moments leh saaxiibo 54
Miyuu jiraa xayawaanka xoolaha, mesmerism, iyo hypnotism la xidhiidha, iyo haddii ay sidaas tahay, sidee bay u la xiriiraan?
Magnetism-ka xayawaanku waa xoog la xidhiidha magnetism-ka kaas oo ka dhex muuqda maydad aan nooleyn, sida hoyga iyo birlabyada bir. Isla xoog ayaa loo sara kiciyay awood sare ee jirka xayawaanka. Magnet-ka xayawaanku waa hawlgalka xoogga iyada oo loo maro jirka xayawaanka kaasoo ah qaab dhismeed qaas ah, oo la xiriira isdhaafsiga xoolaha, sidaa darteed qaabdhismeedka ayaa kicin kara ka dibna u noqon kara kanaal u sameeya xoog magnetka jirka kale ee jirka.
Mesmerism waa magac la siiyay codsi magnetism, ka dib Mesmer (1733-1815), oo dib loo ogaadey ka dibna wax baray oo qoray wax ku saabsan xoogga halkan loogu yaqaan magnetism xayawaan.
Mesmer, waqtiyada qaarkood, waxay isticmaashay magnetismka xayawaanka si dabiici ah; mar marka qaarkood maskaxdiisa ayuu u adeegsaday xiriirka magnetismka. Qaaciddiisa ayaa loo yaqaan mesmerism. Wuxuu ku hagayey magnetismku inuu yahay awood dheecaan ah iyada oo loo marayo talooyinkii faraha uu ku galay jirka bukaanka, taasoo keenta in mararka qaarkood hurdo la helo, oo loo yaqaan isaga ka dib markii hurdo loo yaqaan 'mesmeric hurdi,' badanaana waxay keentay daaweyn dambe. Wuxuu had iyo jeer geliyaa bukaanka, marka bukaanku ku hoosjiro saameynta mesmeric, gobollo kala geddisan, kuwaas oo sheegaaya in Mesmer uu siiyay magacyo kala duwan. Qaababkiisa iyo kala duwanaanshahooda waxaa qoraa qoraalo fara badan oo ka hadlaya maaddadaas.
Hypnotism waa, sida magacu muujinayo, oo keena hurdo nooc ah. Is-miyir-beelku waa waxa keena hurdada iyadoo la adeegsanayo ficil maskaxda qofka marka qofku gebi ahaanba ama qayb ahaan ka beddelo mabaadiida miyir-qabka ah ee ku xidhma xarunta maskaxda ee maskaxda. Hypnotism guud ahaan waa qalliinka hal maankiisa mid kale, iyadoo la adeegsanayo ama aan la helin magnetismka xayawaanka, sidaa darteed hurdada mowduucyada hypnotic-ka waxaa keena ficilka wadaha marka uu faragalinayo gebi ahaanba ama qeyb ahaan xiriirinta mabda'a miyirka iyo xarunta taas oo si feejignaan leh ugu hawlgasha maskaxda maaddada. Hurdada hypnotic, taas oo ka dhalatay faragelinta la xiriirta mabda'a miyirka iyo xarunta ay u shaqeyso si miyir leh, way ka duwantahay hurdada caadiga ah.
Hurdada caadiga ah caqliga ama mabda'a miyirku wuxuu ka fogaadaa xarunta miyirka ee maskaxda, sidaa darteed dabeecadda ayaa laga yaabaa inay hagaajiso jirka oo ay dib u soo celiso isu dheellitirka unugyada. Mabda 'miyirku wuxuu ku wareegi karaa agagaarka xarumaha dareenka maskaxda, ama waxaa laga yaabaa inuu ka weecdo xarumahaas. Markuu mabda'a miyirku ku ekaado hal ama in kabadan oo ka mid ah xarumaha isku xidha aragtida, maqalka, urinta, dhadhaminta, markaa riyada hurdada, iyo riyadiisu waa mid dareen xasaasi ah, ha ahaato mid jireed ama adduun gudaha ah oo ku xiran jirka. Hurdada riyooyinka miyirka miyirku weli wuu miyir qabaa, laakiin madaama laga saaray dareenka, qofku garan maayo sida loo tarjumayo waxa miyirkiisu yahay.
Soo saarida hurdo-kicinta hurgunku waa faragalin ku saabsan mabaadiida miyir-qabka ee qof kale, oo aan u adkaysan karin ama aan iska caabin doonin faragelinta. Marka mowduuca miyirka leh ee mowduuca laga fogeeyo xaruntiisa miyirka, oo ay ku xiran tahay inta lagu jiro hurdada, maaddada waxay ku dhacdaa hurdada hurgunka ah, oo qayb ahaan ama gebi ahaanba miyir beel leh, marka loo eego masaafada weyn ama ka yar taas oo hypnotizer wuxuu ku guuleystey kaxaynta mabda'a miyirka leh ee maaddada. Inta lagu gudajiro hurdada hurdo yahanka hypnotist-ka wuxuu sababi karaa mawduuca inuu arko ama maqlo ama dhadhammo ama uro ama uu dareemo wax kasta oo dareen ah oo laga yaabo inuu ku soo tooso, ama wuxuu sababi karaa maaddada inuu sameeyo ama yiraahdo waxa hypnotizer doonayo inuu sameeyo ama yiraahdo, marka laga reebo, si kastaba ha noqotee, in uusan ku qasbi karin maado inuu sameeyo ficil dhaqan xumo ah oo noqon kara mid ku soo jiidan kara dareenka suuban ee maaddada ka jirta gobolka soo kacaya.
Maskaxda hawl wadeenka ayaa qaadaya meesha mabaadiida miyirkiisu yahay, mawduucuna wuxuu ka jawaabi doonaa oo addeeci doonaa fikirka iyo jihada hypnotizer, marka loo eego cadaynta iyo awooda fikirka hypnotizer iyo heerka uu hiigsanayo. wuxuu la xiriiraa unugyada maskaxda ee maaddada.
Jawaabta su'aasha ee ku saabsan xiriirka magnetismka, mesmerism, iyo hypnotism waa in magnetismka, oo ah awood dabiici ah oo ka shaqeysa jirka ilaa jirka, uu la xiriiro jirka bini aadamka; mesmerism waa hab lagu isticmaalo magnetismka xayawaanka; hypnosis waa natiijada ka soo baxday isticmaalka awooda hal maan ee culeys ka saarey maskax kale. Waa macquul in maanku soo saaro saameynta magnetic iyadoo loo hago qulqulka magnetismka xayawaanka. Hypnotist-ku wuxuu u saadaalin karaa mowduuc hoosaadka hypnotic isagoo marka hore la shaqeynaya magnetismka xayawaanka mawduuca; laakiin dabeecadooda magnetism iyo xoogga hypnotic way ka duwan yihiin midba midka kale.
Sidee ayuu ujirrada xayawaanku u dhaqaajin karaa, iyo sidee loo isticmaali karaa?
Magnetism-ka xoolaha ee ninku waa lagu kobcin karaa iyadoo la samaynayo jidhkiisa oo ah magnet wanaagsan iyo xarun ay ku xoogayso nolosha guud, oo u shaqeysa sida magnetismku u soo jiito. Ninku wuxuu ka dhigi karaa jirkiisa magnet wanaagsan nolosha guud isagoo ku kallifaya xubnaha jirkiisa inay u qabtaan howlahooda si dabiici ah oo caadi ah isla markaana ka hortagaan xad-dhaafka ah cunnada, cabbitaanka, hurdada, iyo xakameynta dabeecadda dareenka. Waxyaabahaas xad-dhaafka ah waxay keenaan in la jebiyo batteriga kaydinta, oo ah qaabka aan muuqan ee jirka jirka, oo mararka qaar loo yaqaanno jirka astral, waa. Maqnaanshaha xad-dhaafka ahi waxay u oggolaaneysaa jirka qaabkiisu inuu xoog yeesho wuxuuna sababayaa in si tartiib tartiib ah polarization iyo hagaajinta molecules-ka hore loo sheegay. Marka sidaa loo dhiso qaab dhismeedka jirku wuxuu noqonayaa kayd xoog leh magnetic.
Qaar ka mid ah adeegsiyada loo isticmaalo magnetismka xayawaanku waa in la dhiso magnetism shaqsiyeed, in jidhka laga dhigo mid jir ahaan xoog leh oo caafimaad qabta oo lagu daweeyo cudurrada dadka kale, in la soo saaro hurdo-magnetic "taas oo aan loogu qaldamin hurdada hurdo-kicinta" iyo sidaas oo kala caddeynta iyo caddeynta, iyo hadallada nebiyada, iyo in la soo saaro saameyn sixir ah, sida ku amraya talismans iyo gambaleel leh awood magnetic. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo adeegsado magnetismka xayawaanka waxaa la gelin karaa sii wadida xoojinta iyo isku-dirka jirka qaab aan la arki karin si markaa dib loogu dhiso oo dib loo cusbooneysiyo oo ay suuragal tahay inaan la noolaan.